Biography yaseStan Lee
UbuGcisa bobuGcisa Iincwadi zeComic
Ngomnyaka wee-1950 uStan Lee, kunye nabaculi abafana noJack Kirby noSteve Ditko , bancedisa ukuvuselela ii-Marvel amahlaya ngokunceda ukudala inxalenye enkulu yabalinganiswa abalulekileyo be-Marvel. Kamva kamva umhleli kunye nomphathi wesikhulu kunye nomqondisi wobugcisa beMarvel, ngexesha elifanayo. Emva kokuyeka umsebenzi wakhe wokuhlela nokubhala, wahlala e-Marvel njengomntu wabantu kunye nomkhulumeli. Naye uye waba ngumlimi olawulayo we-X-Men ne-Spider-Man movie.
UStan waqala ukuhlaziya ii-comics ezisekhompyutheni kunye neengoma zama-comics. Wayengenwabalala nomsebenzi wakhe kwaye wayecinga ukuyeka xa umfazi wamqinisekisa ukuba azame ukubhala ibali ayefuna ukubhala. Yintoni ephuma kuloo khuthazo yayiyinkqutyana yemihla ngemihla I-Fantastic Four . Wayengomnye wabalimi bokuqala bamabhayisiki ukunika iimpazamo zomntu. Ama-superhero angaphambili ayenakwenzeka ukuba awonakalise nakwixesha elifanelekileyo. U-Lee wanika iimpazamo zakhe ezinjenge-Iron Man yobunxila, ukuze abenze bahlonipheke kwaye bangeze ubungqina kubo.
Ukuthandwa kwe-Fantastic ye-4 yayikhokelela u-Lee ukudala ezinye iimpawu ezifana ne-Spider-man kunye ne-X-Men. Ngamnye wayeza kubeka iirekhodi ezigciniweyo ngokwazo. ULee walwa ukunyusa imvulophu kunye namahlaya akhe. Ngomntu wakhe we-Spider-comic ukufa kwintombi yeqhawe uGwen Stacy ezandleni zezitha zakhe uHobbbblin watshintsha ikhondo lembali yencwadi yamahlaya.
Kwakuyiyokuqala i-superhero yehlulekile ukulondoloza usuku. Yavumela abanye ababhali ukuba baphakamise ngokufanayo izigxobo zabo kwiidyarki zabo. Xa amaqhawe avunyelwe ukuhluleka abafundi abazange bakwazi ukuqikelela oko kuza. Oku kwongezelelekileyo inyaniso eyenziwe ngamabali athandwayo kakhulu.
Iqela lakhe i- X-Men yabonwa ngabaninzi njengento engafanelekiyo yokunyuswa kwamalungelo oluntu.
Ngelixa iqela lokuqala lalibandakanywa ngamadoda amathathu amhlophe kunye nomfazi omnye ukuqaliswa kwakhona kwazisa ukukhwabanisa okukhulu. Ngabantu abaliqela besifazane kunye neqela lamadoda avela kwihlabathi lonke ukuqala kwakhona ngokutshintshile ngokutshintshile ubuso bee-comics. Ama-comics kunye nabalinganiswa batshintshile i-industry book book. Uncedise ukwenza uMarvel igama lomkhaya kwaye ulondoloze inkampani. Igalelo lakhe kwiidyarki kunzima ukugqithisa.
UStan Lee wamangalela uMarvel ngento awayevakalelwa kukuba isabelo sakhe seenzuzo ezivela kumabhayisikobho encwadi yamahlaya. Uphumelele kwimeko yakhe kwiNkundla ePhakamileyo, kodwa abagwebi bakaMarvel baceba ukumbongoza.
U-Lee ubhekisela kubaphulaphuli bakhe "njengabazalwana bokwenene".
U-Lee wenze i-comeo kuyo yonke imbonakalo enkulu yefilimu kwaye ngenxa yobudala bakhe obudala, sele sele ebonise i-cameos kwiifilimu ezininzi ezizayo.
Inkcazo yoLuhlu lweeComic Uluhlu lokuThengisa
Top Comic Book Iintlanganiso zeNtlanganiso
Indlela Yokuba Umlobi Wencwadi Yobomi
Yakha uze ushicilele ii-Comics ngokusebenzisa iKickstarter
Yiyiphi i-Back Issue Comic?
Indlela Yokuba YiNcwadi Yobunzima beNcwadi
I-Top Ten Comic Book Anti-Heroes
Ukubuyisela ngeNcwadi yeeNcwadi zoNcedo
Abafazi baseGrike kwiArichaic Age
Ingxelo yeqela laseGolombia leFARC
Ngubani Ubhala IQuran kunye Nini?
Indlela yokudibanisa "Faka" (kufaka) kwiFrentshi
Isikhathi sokulinda kunye neMfundo
I-Fizzy Sherbet Powder Candy Recipe
Indlela yokukhetha iSikole esingcono kunazo zonke zomntwana wakho
Yenza i-Herb Wreath
Imicimbi yeeMidlalo kunye neeNdawo: Iimpawu ezixhatshazayo, iRelays kunye neMicimbi yeMidlalo
I-Ebonite Maxim Bowling Ibhola
PH iMitha Inkcazo
Landmark Landmark "Ndinephupha" Intetho
Iintlobo ezili-10 zeBonsaur Bones ezifundiswe ngabaPaleontologists
Mandarin Chinese Uthando Isigama